Imibuzo Evame Ukubuzwa & IZINDABA |
Ifilimu iChinese Doctors, okuyindlela yokuhlonipha iminyaka eyikhulu kwasungulwa iPhathi, ihlelelwe ukukhishwa ngoJulayi 8 kuleli hlobo. Ukubuyiselwa kwephaneli komzabalazo onzima wokulwa ne-COVID-19, kuhlonipha `` isihlubuki '' esihle kunazo zonke esenziwe ngumqondisi we-Chinese Captain kanye ne-th ...
Ukukhishwa kokuqala komhlaba wonke kwe- "Avengers: Endgamer" kuseChina, ezinsukwini ezimbili ngaphambi kokukhishwa kwayo eNyakatho Melika, okuwumphumela wokugxila kukaMarvel emakethe yaseChina. Yakha irekhodi langaphambilini lamafilimu eMarvel ezweni laseChina, i- "Avengers: Infinity War" kungenzeka ingenise ebhokisini ngaphezu kwe- $ ...
IWonder Woman 1984 ikhombisa ubunjalo bangempela bomuntu futhi ihlola amandla angaphakathi endabeni yokukhula kweWonder Woman 1984 ikulolu shicilelo olushisayo kumabhayisikobho asekhaya. Namuhla, ividiyo yezwi lomlomo ivezwe ngumdidiyeli wefilimu. Lo mlando othinta inhliziyo futhi ofudumele obucayi weWonder Woman ...
I-trailer yokugcina yefilimu yamahlaya iWarm Hugs ikhishwe namuhla
Ikharavani yokugcina yefilimu yamahlaya iWarm Hugs ikhishwe namhlanje, iTrailer ikhombise okokuqala u-bao Bao nengoma yen nuan's engaziwa umhlaba wangaphakathi, laba bantu bobabili balimele ukukhuthazana, kugcwele udaba lokuvuselela imizwa ezihambayo. Njengoba th ...
Inani labasebenzisi be-2-D e-China belikhula, lisuka ezigidini eziyi-158 ngo-2015 laya ezigidini ezingama-345 ngowezi-2019
Inani labasebenzisi be-2-D e-China belikhula, lisuka ezigidini eziyi-158 ngo-2015 laya ezigidini ezingama-345 ngo-2019 Kulinganiselwa ukuthi usayizi wabasebenzisi be-2-d uzofinyelela ezigidini ezingama-413 ngonyaka ka-2020. , Izinkampani ze-Intanethi zinake ...
Ibhokisi lehhovisi lamanye amafilimu akwaDisney eChina
Abstract: Ku-2019, i-Chinese office office yasekhaya ye-Avengers: i-Endgame yathatha amaRandi ayizigidi ezingama-858, ikwenza kube ibhokisi elikhulu kunawo wonke lokudonswa kwefilimu yeDisney ngalowo nyaka, ngokusho kwezibalo. Ngaphezu kwe-Avengers: Endgame, The remake of The classic INgonyama King nayo ...
Ingqungquthela yesi-9 ye-Beijing International Film Festival yase-China Yezokutshalwa Kwezamabhayisikobho Nezezimali
Lo mcimbi omkhulu uhlelwe ngokuhlanganyela yikomidi elihlela iBeijing International Film Festival neChina (Huairou) Film and TELEVISION Industry Demonstration Zone, futhi usekelwa kakhulu yiRural Commercial Bank yaseBeijing kanye nesikhulumi seCultural and Creative Financial Service ...